Iindaba-Iingcebiso ezincinci kwi-SPL evaporative Condensers
Sukwenza nayiphi na inkonzo okanye kufutshane nabalandeli, iinjini, okanye ukuqhuba okanye ngaphakathi kweyunithi ngaphandle kokuqala uqinisekise ukuba abalandeli neempompo zinqanyuliwe, zitshixelwe ngaphandle, kwaye ziphawuliwe.
Khangela ukuqinisekisa ukuba iibheringi zeemoto zefeni zibekwe kakuhle ukunqanda ukugcwala kwemoto.
Iindawo ezivulekileyo kunye / okanye izithintelo ezifakwe emanzini zinokubakho emazantsi endawo ebandayo yamanzi. Lumka xa uhamba ngaphakathi kwesi sixhobo.
Indawo ephezulu ethe tyaba yeyunithi ayenzelwanga ukuba isetyenziswe njengendawo yokuhamba okanye iqonga lokusebenza. Ukuba ukufikelela kumphezulu weyunithi kunqweneleka, umthengi / umsebenzisi wokugqibela ulumkisiwe ukuba asebenzise iindlela ezifanelekileyo zokuthobela imigangatho yokhuseleko esebenzayo yabasemagunyeni bakarhulumente.
Imibhobho yokutshiza ayenzelwanga ukuxhasa ubunzima bomntu okanye isetyenziswe njengendawo yokugcina okanye indawo yokusebenza kuso nasiphi na isixhobo okanye izixhobo. Ukusetyenziswa kwezi njengokuhamba, ukusebenza okanye ukugcina indawo kunokubangela ukwenzakala kubasebenzi okanye ukonakala kwezixhobo. Iiyunithi ezinokuphelisa ukukhukuliseka akufuneki zigqunywe ngetafile yeplastiki.
Abasebenzi bavezwe ngokuthe ngqo ekukhutsheni i-airstream kunye ne-drift / inkungu ehambelana nayo, eveliswe ngexesha lokusebenza kwenkqubo yokuhambisa amanzi kunye / okanye abalandeli, okanye inkungu eveliswa ngoxinzelelo oluphezulu lwejets zamanzi okanye umoya oxinzelelweyo (ukuba usetyenziselwa ukucoca izinto zenkqubo yamanzi ejikelezayo) , kufuneka banxibe izixhobo zokukhusela ukuphefumla ezivunyiweyo ukuba zisetyenziswe ngurhulumente kwezokhuseleko nezempilo.
Isifudumezi sesitya asenzelwanga ukuthintela ukhenketho lomkhenkce ngexesha lokusebenza kweyunithi. Sukusebenzisa isitya sokufudumeza ixesha elide. Inqanaba lolwelo elisezantsi linokwenzeka, kwaye inkqubo ayizukucima enokubangela umonakalo kwisifudumezi nakwiyunithi.
Nceda ubhekise kuMda weWaranti kwiipakethi zokuhambisa ezisebenzayo kwaye zisebenza ngexesha lokuthengisa / ukuthengwa kwezi mveliso. Oku kuchaziwe kule ncwadana ziinkonzo ezinconyelweyo zokuqalisa, ukusebenza, kunye nokucima, kunye nobude obuqikelelweyo bento nganye.
Iiyunithi ze-SPL zifakwa kwangoko emva kokuthunyelwa kwaye uninzi lusebenza unyaka wonke. Nangona kunjalo, ukuba iyunithi kufuneka igcinwe ixesha elide nokuba kungaphambi okanye emva kokufakwa, kufuneka kuthathwe amanyathelo okhuseleko. Umzekelo, ukugubungela iyunithi nge-tarpaulin ecacileyo yeplastiki ngexesha lokugcina kunokubamba ubushushu ngaphakathi kweyunithi, kunokubangela ukonakala kukugcwalisa kunye nezinye izinto zeplastiki. Ukuba iyunithi kufuneka igutyungelwe ngexesha lokugcina, kufuneka kusetyenziswe i-tarp ebonakalayo, ebonakalayo.
Zonke izixhobo zombane, ezisebenza ngoomatshini, kwaye ezijikelezayo zinokuba yingozi, ngakumbi kwabo bangaqhelananga noyilo, ulwakhiwo kunye nokusebenza kwabo. Ke ngoko, sebenzisa iinkqubo ezifanelekileyo zokutshixela ngaphandle. Ukhuseleko olwaneleyo (kubandakanya ukusetyenziswa kweendawo ezivaliweyo zokhuselo apho kukho imfuneko) kufuneka kuthathwe nesi sixhobo ukukhusela uluntu ekonzakaleni kunye nokukhusela umonakalo kwizixhobo, inkqubo ehambelana nazo, kunye nezakhiwo.
Sukusebenzisa iioyile eziqukethe iisepha zokuthambisa ukuthambisa. I-oyile yesithambisi iyakususa i-graphite kwimikhono ethweleyo kwaye ibangele ukusilela kokuthwala. Kwakhona, sukuphazamisa ukulungelelaniswa ngokuqinisa uhlengahlengiso lwekepu kwiyunithi entsha njengoko ilungelelaniswe kumzi-mveliso.
Esi sixhobo akufuneki sisebenze ngaphandle kwazo zonke izikrini zabalandeli, iipaneli zokungena, kunye neengcango zokungena ezikhoyo. Ukukhusela inkonzo egunyazisiweyo kunye nabasebenzi besondlo, fakela isitshixo sokucima ukhiye esibekwe phambi kwento nganye kumatshini wokutshaya kunye nempompo yemoto enxulunyaniswa nesi sixhobo ngokwemeko esebenzayo.
Iindlela zoomatshini nezokusebenza kufuneka zisetyenziselwe ukukhusela ezi mveliso ekonakaleni kunye / okanye ekunciphiseni ukusebenza ngenxa yokubambeka okunokubakho.
Ungaze usebenzise i-chloride okanye i-chlorine solvents esekwe kwi-asidi okanye i-muriatic (i-hydrochloric) acid ukucoca i-stainless steel. Kubalulekile ukuhlamba umphezulu ngamanzi ashushu kwaye usule ngelaphu elomileyo emva kokucoca.
Ulwazi ngokuGcina ngokubanzi
Iinkonzo ezifunekayo ukugcina isiqwenga sesixhobo sokupholisa ngumphunga ikakhulu ngumsebenzi womgangatho womoya namanzi kwindawo yofakelo.
EMOYENI: Ezona meko zemozulu ziyingozi zezi zinenani elingaqhelekanga lomsi womzi mveliso, umsi wemichiza, ityuwa okanye uthuli olunzima. Obo bumdaka buqhutywa ngumoya buhanjiswa kwisixhobo kwaye bufunxwe ngamanzi ajikelezayo ukwenza isisombululo esonakalisayo.
AMANZI:Ezona meko ziyingozi ziyaphuma njengoko amanzi esiba ngumphunga kwizixhobo, eshiya ngasemva izinto eziqinileyo ezazinyibilikisiwe ekuqaleni eziqulathwe kumanzi okuzenzela. Ezi zinto ziqinileyo zichithakeleyo zinokuba yi-alkaline okanye i-asidi kwaye, njengoko zigxile kumanzi ajikelezayo, zinokuvelisa ukukala okanye ukukhawulezisa ukubola.
l Ubungakanani bokungcola emoyeni nasemanzini kumisela ubuninzi beenkonzo zolondolozo kwaye kulawula ubungakanani bonyango lwamanzi olunokwahluka kulawulo olulula lokopha kunye nokulawulwa kwendalo ukuya kwinkqubo yonyango ephucukileyo.